Brand.net: Fampirantiana fampisehoana an-tsary sy fizahana tarehin-tsoratra | Martech Zone
Brand.net: Doka Precision Geographic sy Data-Driven Display
Zoma Janoary 17, 2014 Sabotsy, Janoary 14, 2017 Douglas Karr
Omaly dia niara-nisakafo antoandro niaraka tamin'ny sakaizako Troy Bruinsma, mpanantanteraka varotra sy marketing mahomby aho. Taona maro lasa izay, niasa tamin'ny fanentanana mailaka mivantana ho an'i Troy izahay fony izy niasa tamina orinasa tariby. Mampiasa ny fanadiovana angona, ny angon-drakitra ho an'ny mpanjifany, ny angon-drakitra fisoratana anarana, ny angon-tahak'izy ireo amin'ny demografika ary ny asan'ny TON iray… azonay natao ny nampahafantatra ireo mpanjifany ankehitriny sy mamantatra, isaky ny ankohonana, izay fianakaviana mety hisoratra anarana amin'ny fonosana na fantsona manokana. Tetika tsy mampino!
Mandrosoa haingana ary ankehitriny dia miasa i Troy Valassis, ary nampahafantatra ahy ny zavatra efa niasan'izy ireo tamin'ny Brand.net. Brand.net manana vahaolana marketing dizitaly izay misy laharana tsy manam-paharoa 2,000+ loharanom-baovao manan-karena sy syndicated - natambatra ho sehatra tambajotra doka tokana.
miaraka Brand.net, ny mpanao dokam-barotra dia omena fahefana hahatratra ny mpihaino kendrena azy ireo amin'ny ambaratonga manerana ny kalitao, ny seho misy fiatraikany be, ny horonan-tsary ary ny tontolon'ny finday. Ny Brand.net dia mihoatra ny tanjon'ny fampielezan-kevitra izay manadanja indrindra ny mpanao doka, manome fahombiazana amin'ny alàlan'ny fidirana an-tserasera, fanentanana ary ny fividianana ivelan'ny Internet.
Voadio tokoa ny rafitra ka mivadika ho any amin'ny faritra kendrena amin'ny doka… ny faritra adiresy IP izay mamela ny mpanao dokam-barotra mampiseho doka amin'ny faritra jeografika kendrena bitika. Araka ny fanazavan'i Troy, ity dia afaka manome mpivarotra fiara handefasa ny mombamomba ny mpanjifany ary hampiseho doka amin'ny tranokala mifandraika amin'ny tambajotran-doka ataon'izy ireo manokana amin'ireo olona lavitra ny toerana misy azy ireo.
Wow… alaivo an-tsaina izany! Ny tamba-jotra dokam-barotra dia novolavolaina hamantarana, kendrena ary hampifandray ireo mpanao dokam-barotra amin'ny vinan'izy ireo tsara indrindra.
Tags: tambajotra dokafaritra ifantohan'ny dokam-barotraatzbrand.netmampiseho dokalasibatra ara-jeografikajeografiageotargetingvalassis
Azafady Aza mianjera amin'ny spam amin'ny mailaka SEO
Ampush: Sehatra marketing ara-tsosialy Facebook Ad